Ahoana no hamantarana ny isan-jaton'ny fatin'ny vatana?
Olona maro izay miezaka ny tsara indrindra, maniry ny hahafantatra ny habetsahan'ny tavy ao amin'ny vatana. Raha fantatrao io sanda io, azonao takarina raha mendrika ny ho very ny lanjany na, raha ny tokony ho izy dia mila mahazo pounds vitsivitsy ianao. Ny isan-jatony amin'ny fatin'ny vatan'ny vehivavy dia 18-25%. Raha toa ka mahatratra 35% ny sandany, dia hampiseho ny mariky ny fiterahana ny vatany.
Misy safidy maro samihafa, ohatra, azonao atao ny mamaritra ny volavolan-tserasera amin'ny fehezan-tsoratra mba hahitana ny fiovan'ny fanovana. Saingy tsy azo heverina ho an'izao tontolo izao izany, satria misy hadisoana manan-danja.
Fomba hafa hahafantarana ny isan-jaton'ny fatin'ny vatana:
Bioimpedance . Efa hatry ny ela no nanaporofoana fa ny hery matavy, ny hozatra ary ny faritra hafa ao amin'ny vatana dia manana hery manohitra ny herinaratra. Ity fomba fitsaboana ity dia ampiasaina amin'ny fitsaboana, fa amin'izao fotoana izao dia afaka mividy mizana an-trano ianao, izay mifototra amin'izany teknika izany ny asany.
Ultrasound . Ny fomba fanao dia novolavolaina raha jerena ny habetsaky ny hafanana miovaova amin'ny fitondran-tenany manokana. Amin'izao dingana izao, io fomba io matetika dia tsy manome ny vokatra tsara, noho izany dia mbola misy foana ny asa.
Mandanja rano . Ny endriny tena sarotra dia ampiasaina amin'io fomba fiasa io. Mitranga toy izao ny fandrefesana: misy olona mipetraka eo amin'ny seza iray izay mihantona amin'ny mizana. Avy eo dia mandray fofona mafy izy ary mandoa 10 segondra. ao anaty rano. Mba hahazoana valiny marina, dia averina in-telo ny dingana.
X-ray scanner . Ity no fomba tsara indrindra hamantarana ny isan-jaton'ny fatin'ny vatanao, nefa koa lafo kokoa. Noho ny teknika manokana dia misy ny sanda mety.
Famakiana tavy matsiro . Ny fomba tsotra sy mahafa-po indrindra mba hahazoana valiny tena marina. Miaraka amin'ny fanampian'ny fitaovana fampiasa amin'ny tsindry manokana, dia voafehy amin'ny toerana maromaro ireo fatram-bolo. Amin'ny ankapobeny, azonao ampiasaina ny fifandimbiasana tsy tapaka. Ny fatran-doko matroka dia hozaraina amin'ny triceps, biceps, tavy , ary eo ambanin'ny soroka lamosina. Ny sanda rehetra dia ampiana, ary avy eo dia jereo ireo soso-kevitra atolotra eo amin'ny latabatra.
Ny gymnastika Norbekov ho an'ny hazondamosina
Inona no mialoha ny fiofanana?
Gymnastics taorian'ny fandrobana
Fanazaran-tena ho an'ny ambany kokoa
Yoga miaraka amin'i Karina Kharchinskaya
Fananganana trano - inona ary ary ahoana no ataon'izy ireo?
Ahoana no hanamafisana ny ligamanta sy ny tendany?
Rahoviana aho no bevohoka rehefa teraka?
Svitshoty misy dikany
Ny teti-bola ho an'ny pin
Ny Hall's Wolf
Cookies "Kiss" miaraka amin'ny tsaramaso tranokely
The Strobest Phobias
Ahoana ny fomba hanaovana visa Schengen?
Nahoana no nofy ny hividy trano?
Ahoana no hananana salady iceberg?
Sakafo maniry amin'ny fararano
Ny lokon'ny lakozia amin'ny feng shui
Iza no mipetraka eo amin'ny jiolahy?